ကိတ်ကိုရယူမည် - ကိတ်
မြန်မာ English British English Català Català (Valencià) Deutsch Eesti Español Français Italiano Nederlands Norsk (nynorsk) Polski Português Português brasileiro Română Slovenščina Svenska Český Ελληνικά Русский Українська 简体中文 한국어
လင်းနပ်စ် နှင့် ယူနစ်စ်များ
သင်၏ဒစ်စထရီဗျူးရှင်း မှ ကိတ် သို့မဟုတ် ကေရိုက် တပ်ဆင်မည်
These buttons only work with Discover and other AppStream application stores, such as GNOME Software. You can also use your distribution’s package manager, such as Muon or Synaptic.
Kate’s Snap package in Snapcraft
Kate’s release (64bit) AppImage package *
Kate’s nightly (64bit) AppImage package **
Build it မူရင်းမှ။
Kate release (64bit) installer *
ကိတ်ညစဥ် (၆၄ဘစ်) တပ်ဆင်ဖိုင်လ် **
Kate release installer *
Kate nightly installer **
ကိတ် နှင့် ကေရိုက် သည် ကေဒီအီးအပ္ပလီကေးရှင်းများတွင် ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့ကို တစ်နှစ်သုံးကြိမ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်ဝေသည်။ စာသားတည်းဖြတ်ခြင်း နှင့် စာအထားအသိုအလင်းတင်ပြခြင်း ဆိုင်ရာအင်ဂျင်များကို လစဥ်အပ်ဒိတ်တင်သည်ဖြစ်သော ကေဒီအီးမူဘောင်များ မှထုတ်ပေးသည်။ ထုတ်ဝေမှုအသစ်များကို ဤနေရာ တွင် ကြေညာသည်။
* ကေဒီအီးမူဘောင်များနှင့် ကိတ်၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗာရှင်းတို့သည် ထုတ်ဝေမှု ပတ်ကေ့ချ်တွင် ပါဝင်သည်။
** The ညစဥ် ပတ်ကေ့ချ်များကို ဇစ်မြစ်ကုတ်မှ နေ့စဥ်ကွန်ပိုင်းလုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့သည် တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပြစ်ချက်များ သို့မဟုတ် တစ်ဝက်တစ်ပျက် စွမ်းဆောင်ရည်များ ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက်သာ သုံးရန် အကြုံပြုသည်။
Maintained by KDE Webmasters (public mailing list). Generated from c03b6ea6. KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V. | Legal